မျက်ရည်တွေကြားထဲက ပစ်ခဲ့ ရတဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ရှိ တယ် – Na Pann San
မျက်ရည်တွေကြားထဲက ပစ်ခဲ့ ရတဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ရှိ တယ်
Na Pann San W | May 4, 2020 | Knowledge | No Comments
ငို ပြီး ပစ်ခဲ့ ရတဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ရှိ တယ်
နေရာ က သောင်ရင်းမြစ် အနောက်ခြမ်း။ အဝေးကို လှမ်းကြည့်ရင် စိမ်းပြာရောင် တောင်တန်းတွေက လှိုင်းတံပိုးတွေ အလား ၀န်းရံလို့။ အနောက်ဘက်ဆီက သစ်မျောတွေ က သောင်ရင်းရဲ့ ရင်ကိုခွဲလို့ တအိအိနဲ့ ဆင်းလာနေတယ်။ အပြာနုရောင် အမိုးအောက်မှာ တိမ်ဖြူတွေက ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ။
တစ်ခါတစ်ခါ ရိုးမအတွင်း က ဂျီဟောက်သံက မကြားတကြား။ သောင်ရင်းမြစ်ရေက ငြိမ်တစ်ခါ ကြမ်းတစ်လှည့်နဲ့ .. သံလွင်ဆီကို စီးဆင်းနေလေရဲ့။ အရာရာ ဟာ အထီးကျန်ခြင်းရဲ့ပြယုဂ် တစ်ခုအလား တစ်စပြင် ကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သတ်။ ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းထဲက စစ်သားတစ်ယောက် ပွတ်ချွန်းလို့ခေါ်တဲ့ … (လက်ဘက်ခြောက်ကို အိမ်သာသုံးစက္ကုနဲ့လိပ်ထားတဲ့) ဆေးလိပ်ကို ပါးချိုင့်အောင် ဖွာနေတယ်။
သူ့အတွက် အထီးကျန်ခြင်းကို တီးမိခေါက်မိ မရှိဘူး ပျင်းရိခြင်းကိုနားမလည်ဘူး ။ တစ်ခါတစ်ခါ အလွမ်းကလွဲရင် ဘာမှမပိုင်တဲ့ သူ့အဖို့ အဝေးကအသံတစ်ချို့ကို နားစွင့်ရင်း ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ထိုင်နေလေရဲ့။ သြော်….သူရောက်နေတဲ့နေရာက ” ရင်……ဆိုင်…….ကုန်း” ရင်ဆိုင်ကုန်းဆိုတာကတော့ မိမိ တပ်နဲ့ရန် သူ့တပ် နှစ်ခုဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကုန်းနှစ်ခု အပေါ်မှာစခန်းချထားတာပါ။
ကိုယ့်ဘက်က ကျည်ထိုးသံ သူ ကြား … သူ့ဘက်က မောင်းတင်သံ ကိုယ် ကြား တဲ့နေရာပေါ့။ စစ်ရေးသတိ အပြည့်ရှိရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး တစ်ချက် မှားတာနဲ့ ဇိဝိန်ကြွေသွားနိုင်တယ်။ အားလုံးတိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် ခေါင်းတောင်မဖော်ကြပဲ ကျင်းတွေမြောင်းတွေထဲမှာ အသံတိတ်နေရတာပါ။
ဘယ်လောက်ကြာအောင်နေရလဲဆိုတော့ နှစ်ချို့အောင်နေရ ပါတယ်။ အရာရာကို တိတ်ဆိတ်ခြင်းကလွှမ်းမိုးလို့ အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင် စခန်းပျက်ကြီးတွေ အလား ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ကုန်းနှစ်ခုက တပ်သားတွေ နှစ်ချို့ခဲ့ကြတယ်။ စစ်သားလည်း လူသားပေမို့ထူးဆန်းစွာပဲ မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ ရန်သူတွေ အချင်းချင်း သံယောဇဉ်က တစ်စတစ်စ ပေါ့။
“ဂေါင် ဂေါင် ဂေါင်” (ဟန်းကောကို ဒုတ်နှင့်ခေါက်သံ) “ဟိုဘက် ကယောက်ဖတွေရေ ဘာချက်လဲဟေ့” ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းထဲ ကပြန်ဖြေတယ်…. “၀က်သား” “ဟဟ မဖြိးနဲ့ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ဘက်က ငါးပိဖုတ်နံ့ဒီကတောင်ရတယ်။” “အောင်မာ မင်းတို့ဘက်က ငှက်ပျောအူ ပြုတ်နံ့ကရော မနက်ကတည်း ကရနေတာ။”
“ဟင်းစားလဲမလား ” “လုပ်လိုက်လေ သေနတ် မယူကြေး … ကုန်းနှစ်ခုကြားက ချောင်းခြောက် မှာ လဲမယ်။” ဒီလိုနဲ သူတို့တွေ ရင်းနှီးလာခဲ့ကြတယ်။ ဟင်းစားတွေ လဲ စားကြတယ်။ ကုန်းနှစ်ခုကြားက ချောင်းခြောက်က ခြင်းကွင်းဖြစ်နေပြီ။ ညနေဆို တပ်နှစ်ခုချိန်းပြီးခြင်းခတ်တယ်။ ကြေးကတော့မများပါဘူး ကုန်းပိုးစီးကြေး။
ငပိ တစ်ပိသာကြေး။ စသည်ဖြစ်ပေါ့။ စစ်ရေးသတိကတော့ နှစ်ဘက်လုံးရှိကြပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ သေနတ်တွေ ဖွက်ယူလာခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့လည်း မယူကြတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ချို့ လာခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့ အမိန့်တစ်ခုကြောင့်။ သို့မဟုတ် အခြေနေတစ်ခုကြောင့် … သူတို့တွေ တိုက်ခဲ့ ကြတယ်။
နိုင် တဲ့ဘက် နိုင်မယ် ….. ရှုံးတဲ့ ဘက် ရှုံး မယ်။ စစ်မှာ အရှုံး အနိုင်မရှိ သေသူနဲ့ရှင်သူပဲ ရှိသည်လေ။ ကျတော် ကြားဘူးသလောက် …. တစ်ချို့က ငိုပြီး ပစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ “စိတ်မကောင်းပါဘူးယောက်ဖတို့ရာ …. မင်းတို့ပြေးပါတော့ “လို့ နိုင်တဲ့ဘက်က အော် ပစ် တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး…… ကျတော်တို့သိပ်လိုချင်တယ်ဗျာ။
အဲဒီလိုခံစားမှုမျိုးတွေ က ခံရခက်လှတယ်။ ဒါတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးလို့တတွင်တွင် အော်ပြနေတဲ့ မျောက်ပြဆန်တောင်းတွေအဖို့ နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြုံဘူးမှာ လဲမဟုတ်ကြဘူး ။ အဲဒီ အဲဒီ စစ်မြေပြင် က နှစ်ဘက် စစ် သားတွေ အသိဆုံးနေလိမ့်မယ်။ ဘယ်စစ်သားမဆို စစ်မတိုက်ချင်ကြပါဘူး။
အဓိကတာဝန်က စစ်တိုက်ရန်ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်တပ်မှာကို တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း မိသားစုနဲ့နေချင်ကြသူချည်းပဲ။ ခင်ဗျား တို့က အကျီ င်္အပြာတွေဝတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ပြတယ်။ ကျုပ်တို့က အကျီ င်္ီအစ်ိမ်းတွေဝတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အောက်မှာ အံကြိတ်ခဲ့ ရတယ်။ စစ်သားဟာ စစ်မတိုက်ချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ သွေးထွက်သံယိုတွေ နာကျည်းမှုတွေ ငိုကျွေးမှုတွေ … နာမည်မတပ်နိုင်တဲ့ ခံစားမှု မျိုးတွေကို စစ်သားပဲ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတာ။
ကျွန်တော် အပေါ်မှာရေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးက ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အဖေပြောပြတဲ့ … သူတို့တုန်းက ဟိုး ကရင်ပြည်နယ်ဘက်က အကြောင်းလေးပါ။ အခုတော့ သူတို့တွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရကြပြီ။ အမိုးအိမ်မှာထမင်းစားရင် ဖထီးက M 16 နဲ့မပစ်တော့ဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ဟိုးတုန်းက စခန်းကုန်းနှစ်ခုကြားက ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး ခတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကုန်းပိုးစီးကြေး ခြင်းခတ် ပွဲဟာ အခုတော့ မြိုင်ကြီးငူဒေသမှာ ကျင်းပနေပြီ။
ယောက်ဖတွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် တူတူ ထိုင်နေကြပြီ။ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တူတူ တက်ကြပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အဓွန့်ရှည် ပါစေ။ စစ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါစေ။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် -ပွကြီး(¥)
ငို ပွီး ပဈခဲ့ ရတဲ့ ကညျြဆနျတှေ ရှိ တယျ
နရော က သောငျရငျးမွဈ အနောကျခွမျး။ အဝေးကို လှမျးကွညျ့ရငျ စိမျးပွာရောငျ တောငျတနျးတှကေ လှိုငျးတံပိုးတှေ အလား ဝနျးရံလို့။ အနောကျဘကျဆီက သဈမြောတှေ က သောငျရငျးရဲ့ ရငျကိုခှဲလို့ တအိအိနဲ့ ဆငျးလာနတေယျ။ အပွာနုရောငျ အမိုးအောကျမှာ တိမျဖွူတှကေ ဟိုတဈကှကျ ဒီတဈကှကျ ။
တဈခါတဈခါ ရိုးမအတှငျး က ဂြီဟောကျသံက မကွားတကွား။ သောငျရငျးမွဈရကေ ငွိမျတဈခါ ကွမျးတဈလှညျ့နဲ့ .. သံလှငျဆီကို စီးဆငျးနလေရေဲ့။ အရာရာ ဟာ အထီးကနျြခွငျးရဲ့ပွယုဂျ တဈခုအလား တဈစပွငျ ကဲ့သို့တိတျဆိတျငွိမျသတျ။ ဆကျသှယျရေးမွောငျးထဲက စဈသားတဈယောကျ ပှတျခြှနျးလို့ချေါတဲ့ … (လကျဘကျခွောကျကို အိမျသာသုံးစက်ကုနဲ့လိပျထားတဲ့) ဆေးလိပျကို ပါးခြိုငျ့အောငျ ဖှာနတေယျ။
သူ့အတှကျ အထီးကနျြခွငျးကို တီးမိခေါကျမိ မရှိဘူး ပငျြးရိခွငျးကိုနားမလညျဘူး ။ တဈခါတဈခါ အလှမျးကလှဲရငျ ဘာမှမပိုငျတဲ့ သူ့အဖို့ အဝေးကအသံတဈခြို့ကို နားစှငျ့ရငျး ခြှေးတဈလုံးလုံးနဲ့ထိုငျနလေရေဲ့။ သွျော….သူရောကျနတေဲ့နရောက ” ရငျ……ဆိုငျ…….ကုနျး” ရငျဆိုငျကုနျးဆိုတာကတော့ မိမိ တပျနဲ့ရနျ သူ့တပျ နှဈခုဟာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ကုနျးနှဈခု အပျေါမှာစခနျးခထြားတာပါ။
ကိုယျ့ဘကျက ကညျြထိုးသံ သူ ကွား … သူ့ဘကျက မောငျးတငျသံ ကိုယျ ကွား တဲ့နရောပေါ့။ စဈရေးသတိ အပွညျ့ရှိရတဲ့နရောဖွဈပွီး တဈခကျြ မှားတာနဲ့ ဇိဝိနျကွှသှေားနိုငျတယျ။ အားလုံးတိတျဆိတျ ငွိမျသကျ ခေါငျးတောငျမဖျောကွပဲ ကငျြးတှမွေောငျးတှထေဲမှာ အသံတိတျနရေတာပါ။
ဘယျလောကျကွာအောငျနရေလဲဆိုတော့ နှဈခြို့အောငျနရေ ပါတယျ။ အရာရာကို တိတျဆိတျခွငျးကလှမျးမိုးလို့ အဝေးကလှမျးကွညျ့ရငျ စခနျးပကျြကွီးတှေ အလား ပေါ့ဗြာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရငျဆိုငျကုနျးနှဈခုက တပျသားတှေ နှဈခြို့ခဲ့ကွတယျ။ စဈသားလညျး လူသားပမေို့ထူးဆနျးစှာပဲ မမွငျဘူးမတှဘေူ့းတဲ့ ရနျသူတှေ အခငျြးခငျြး သံယောဇဉျက တဈစတဈစ ပေါ့။
“ဂေါငျ ဂေါငျ ဂေါငျ” (ဟနျးကောကို ဒုတျနှငျ့ခေါကျသံ) “ဟိုဘကျ ကယောကျဖတှရေေ ဘာခကျြလဲဟေ့” ဆကျသှယျရေးမွောငျးထဲ ကပွနျဖွတေယျ…. “ဝကျသား” “ဟဟ မဖွိးနဲ့ဟကေ့ောငျတှေ မငျးတို့ဘကျက ငါးပိဖုတျနံ့ဒီကတောငျရတယျ။” “အောငျမာ မငျးတို့ဘကျက ငှကျပြောအူ ပွုတျနံ့ကရော မနကျကတညျး ကရနတော။”
“ဟငျးစားလဲမလား ” “လုပျလိုကျလေ သနေတျ မယူကွေး … ကုနျးနှဈခုကွားက ခြောငျးခွောကျ မှာ လဲမယျ။” ဒီလိုနဲ သူတို့တှေ ရငျးနှီးလာခဲ့ကွတယျ။ ဟငျးစားတှေ လဲ စားကွတယျ။ ကုနျးနှဈခုကွားက ခြောငျးခွောကျက ခွငျးကှငျးဖွဈနပွေီ။ ညနဆေို တပျနှဈခုခြိနျးပွီးခွငျးခတျတယျ။ ကွေးကတော့မမြားပါဘူး ကုနျးပိုးစီးကွေး။
ငပိ တဈပိသာကွေး။ စသညျဖွဈပေါ့။ စဈရေးသတိကတော့ နှဈဘကျလုံးရှိကွပါတယျ။ အစပိုငျးတော့ သနေတျတှေ ဖှကျယူလာခဲ့ကွတယျ။ နောကျတော့လညျး မယူကွတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့နှဈခြို့ လာခဲ့ကွတယျ။ တဈနေ့ အမိနျ့တဈခုကွောငျ့။ သို့မဟုတျ အခွနေတေဈခုကွောငျ့ … သူတို့တှေ တိုကျခဲ့ ကွတယျ။
နိုငျ တဲ့ဘကျ နိုငျမယျ ….. ရှုံးတဲ့ ဘကျ ရှုံး မယျ။ စဈမှာ အရှုံး အနိုငျမရှိ သသေူနဲ့ရှငျသူပဲ ရှိသညျလေ။ ကတြျော ကွားဘူးသလောကျ …. တဈခြို့က ငိုပွီး ပဈတယျလို့ကွားဘူးတယျ။ “စိတျမကောငျးပါဘူးယောကျဖတို့ရာ …. မငျးတို့ပွေးပါတော့ “လို့ နိုငျတဲ့ဘကျက အျော ပဈ တယျ။ ငွိမျးခမျြးရေး…… ကတြျောတို့သိပျလိုခငျြတယျဗြာ။
အဲဒီလိုခံစားမှုမြိုးတှေ က ခံရခကျလှတယျ။ ဒါတှကေို ငွိမျးခမျြးရေးလို့တတှငျတှငျ အျောပွနတေဲ့ မြောကျပွဆနျတောငျးတှအေဖို့ နားလညျမှာမဟုတျပါဘူး။ ကွုံဘူးမှာ လဲမဟုတျကွဘူး ။ အဲဒီ အဲဒီ စဈမွပွေငျ က နှဈဘကျ စဈ သားတှေ အသိဆုံးနလေိမျ့မယျ။ ဘယျစဈသားမဆို စဈမတိုကျခငျြကွပါဘူး။
အဓိကတာဝနျက စဈတိုကျရနျဆိုပမေယျ့ ဘယျသူမဆို ကိုယျ့တပျမှာကို တပျတညျဆောကျရေးလုပျပွီး အေးအေးခမျြးခမျြး မိသားစုနဲ့နခေငျြကွသူခညျြးပဲ။ ခငျဗြား တို့က အကြီ င်ျအပွာတှဝေတျပွီး ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ လမျးလြှောကျပွတယျ။ ကြုပျတို့က အကြီ င်္ီအစိမျးတှဝေတျပွီး ငွိမျးခမျြးရေး အောကျမှာ အံကွိတျခဲ့ ရတယျ။ စဈသားဟာ စဈမတိုကျခငျြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စဈရဲ့ဆိုးကြိုးတှေ သှေးထှကျသံယိုတှေ နာကညျြးမှုတှေ ငိုကြှေးမှုတှေ … နာမညျမတပျနိုငျတဲ့ ခံစားမှု မြိုးတှကေို စဈသားပဲ တိုကျရိုကျထိတှရေ့တာ။
ကြှနျတျော အပျေါမှာရေးတဲ့ အကွောငျးအရာလေးက ကိုယျတှမေ့ဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ အဖပွေောပွတဲ့ … သူတို့တုနျးက ဟိုး ကရငျပွညျနယျဘကျက အကွောငျးလေးပါ။ အခုတော့ သူတို့တှေ ငွိမျးခမျြးရေး ရကွပွီ။ အမိုးအိမျမှာထမငျးစားရငျ ဖထီးက M 16 နဲ့မပဈတော့ဘူး။ သူတို့တှရေဲ့ဟိုးတုနျးက စခနျးကုနျးနှဈခုကွားက ပုနျးရှိုး ကှယျရှိုး ခတျခဲ့ကွတဲ့ ကုနျးပိုးစီးကွေး ခွငျးခတျ ပှဲဟာ အခုတော့ မွိုငျကွီးငူဒသေမှာ ကငျြးပနပွေီ။
ယောကျဖတှေ လကျဘကျရညျဆိုငျ တူတူ ထိုငျနကွေပွီ။ ဇှဲကပငျတောငျပျေါကို တူတူ တကျကွပွီ။ ငွိမျးခမျြးရေး အဓှနျ့ရှညျ ပါစေ။ စဈဆိုတာကို နားလညျနိုငျပါစေ။
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ -ပှကွီး(¥)
ခြင် လုံးဝ မလာဘူးပြောလို့ စမ်းတာ တကယ် အမှန်အကန် ဟုတ်နေ တဲ့ ခြင်မလာစေ တဲ့နည်း
ATM စက်မှာ ပိုက်ဆံထုတ်တာ ငွေလည်း ထွက်မလာ ကဒ်လည်းပြန် ထွက်မလာလို့ စိတ်ညစ်နေရင် ဒီနည်းလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ၊ အဆင်ပြေတယ်ဆို SHARE သွားပေးနော်………